MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EE SIBERIA HUSKY DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka ee Siberia Husky Dog
Ace the Siberian Husky at 2 sano jir— 'Ace waa xayawaan xayawaan ah oo cajiib ah oo farxad badan u keenay qoyskeena! Waxaa loo iibsaday gabadheenna, Brittany 2 sano ka hor, Brittany waxay ahayd 15 jir xilligaas, waxay ku dadaashay intii ugu wanaagsaneyd inay ka sii mid ahaato xukuma 'hooyo'. Iyadu maskax adag kuma filnaan karto inay tan sameyso sidaa darteed aabbeheed iyo aniga waxaan la wareegnay isaga edbinta loo baahan yahay . Marka isagu wuxuu ka fikiraa iyada oo walaalo ah oo Brittany aabbaheed waa 'alpha' lab, aniguna waxaan la mid ahay qofka 2aad ee amarka leh. Lol. Wuxuu u eg yahay ilmo weynaaday! Waxaan ku noolahay ilaa koonfurta ilaa Alabama intaad heli karto waxaana ku qasbanaanay inaan wadno wadada dhan ilaa 400 mayl woqooyiga sare ee Alabama si aan uga helno abuure sumcad leh. Waxaan haynaa barkad caruur ah oo biyo ka buuxaan sanadka oo dhan maxaa yeelay waxaan leenahay jiilaal qabow. Waxaan ku haynaa waraaqo isaga waxaanan ku haynaa microchipped waxaanan sameynaa wax walba oo aan sameyn karno si aan u hubino inuu sii ahaado mid faraxsan oo caafimaad qaba. Waxaan leenahay isaga ma uusan baran weli oo laga doodayey isaga oo la dhex gelinayo maxaa yeelay wuxuu ku baaba'aa dhowr maalmood waqti halkan iyo halkaas si uu ugu dhibaateeyo dumarka xaafadda. Xayndaabku ku celin maayo maadaama uu ka soo booday meel 6-7 dherer ah oo fadhiga ah waxaanna adeegsanay silig xayndaab silig ah laakiin isagoo ah eey madax adag oo kaliya wuxuu helayaa meel ka liidata oo madaxa hoos u dhigaysa oo ku orodaysa! Haddii kale wuu iskala wareegayaa oo waxaan ku nool nahay waddanka sidaa darteed qollo badan oo orod ah ayaa jira oo farxad u muuqda. Waan jecel nahay isaga kumana ganacsan doonno adduunka! '
Siberia Huskies waa eeyo xoog leh, is haysta, oo shaqeeya. Madaxa dhexdhexaadka ah waa mid u dhigma jirka, oo leh afkiisa oo u dhigma dhererkiisa ilaa qalfoofka, oo leh joogsi qeexan. Midabka sanku wuxuu kuxiranyahay midabka jaakada eyga. Waa madow eey cirroole, midab madow ama midab madow ah, beerka eeyaha naxaasta ah iyo midabka hilibka leh eeyaha cad cad. Indhaha dhexdhexaadka ah, ee u eg qaabka oval-ka ayaa dhexdhexaad u dhexeeyaa waxayna ku yimaadaan buluug, bunni, kuul ama wax kasta oo isku dar ah. Indhuhu waxay noqon karaan badh buluug iyo badh bunni ah (indho-indho), ama eeyaha ayaa yeelan kara mid isha buluug ah iyo hal il oo bunni ah (laba-indhood). Dhegaha kacsan waa qaab saddex geesood ah, korna loo saaray madaxa. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Dabada waxaa lagu qaadaa dhabarka iyada oo loo maro qalooca sickle, looma weecinayo labada dhinacba marka eeygu faraxsan yahay. Cagaha weyn ee 'kabaha barafka' waxay leeyihiin timo u dhexeeya suulasha si looga caawiyo inay diirimaad yeeshaan iyo qabashada barafka. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Dhexda-dhererka dhexe, jaakad laba jibbaaran ayaa dhumuc weyn leh una adkeysan karta heerkulka hooseeya -58 ° ilaa -76 ° F (-50 ° ilaa -60 ° C). Koodhku sidoo kale wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan oo timo dhaadheer leh oo loo yaqaan jaakad dhogorta leh. Dhererka jaakadda dhogorta dhogorta leh (mararka qaarkood loo yaqaan dhogor dhogor ama wooley) wuxuu ka yimaadaa hiddo-wadaha is-bedbeddelaya oo kuma jiro inta badan heerarka qoran ee naadiga digaagga. Midabada koofiyaddu waxay ka kooban yihiin dhammaantood, laga bilaabo madow illaa caddaan saafi ah, oo leh ama aan lahayn calaamado madaxa ah. Maaskarada wejiga iyo hoosta ayaa inta badan cadaan ah, jaakada hadhayna waa midab. Tusaalooyinka midabbada guud waa madow iyo caddaan, casaan iyo caddaan, bunni, cawl iyo caddaan, lacag, yeey-cirro, saable iyo caddaan, casaan casaan leh talooyin madow, cawl madow iyo caddaan. Piebald waa qaab jaakad aad u caan ah.
Siberia Huskies waa kalgacal, dabacsan, ciyaar badan, eeyo-nasiib-nasiib leh oo jecel qoysaskooda. Keen, degli, bulsho, dabacsan oo aan caadi ahayn, kani waa eey tamar badan leh, gaar ahaan markuu da 'yar yahay. Ku wanaagsan carruurta iyo saaxiibtinimada shisheeyaha, ma ahan ilaaliyeyaal, maxaa yeelay wax yar bay cabaan oo qof walba way jecel yihiin. Xayawaanku waa kuwo caqli badan oo tababaran, laakiin waxay adeeci doonaan oo keliya amar haddii ay arkaan in aadanaha uu ka maskax adag yahay naftooda. Haddii shaqaaluhu muujiyo hogaamin, ma arki doonaan ujeedada u hogaansamida. Tababar waxay qaadataa dulqaad, joogtayn iyo fahamka dabeecadda eyga Arctic. Haddii aadan ahayn eeygan 100% adag, kalsooni leh, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada , wuu ka faa'iideysan doonaa, noqoshada ula kac iyo dhaqan xumo . Huskies wuxuu sameeyaa heer sare saaxiibka orodka , illaa inta aysan kululayn. Guurguurku wuu noqon karaa adag tahay in guriga la dumiyo . Noocani wuxuu jecel yahay inuu qayliyo oo uu si fudud ku caajiso. Si fiican uma shaqeynayo haddii keligaa laga tegey muddo dheer oo aan jimicsi weyn la sii samayn ka hor. Husky cidla ah, ama Husky ah oo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo mid jireed noqon kara aad u burburin . Xusuusnow in Husky uu yahay a eey sled ah qalbiga iyo nafta. Way ku fiican tahay xayawaanka kale haddii lagu soo koriyo eeyaha. Huskies waa cunno cunno badan waxayna u baahan yihiin cunto ka yar intaad filan karto. Noocani wuxuu jecel yahay inuu meeraysto. Siberia Huskies waxay u samayn kartaa saaxiibo cajaa'ib leh dadka ka warqaba waxa laga filan karo xayawaankan quruxda badan iyo kuwa caqliga badan isla markaana diyaar u ah inay waqtiga iyo xooggooda geliyaan.
Dhererka: Ragga 21 - 23½ inji (53 - 60 cm) Dumarka 20 - 22 inji (51 - 56 cm)
madow iyo cadaan isku qas ah
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia, ectopy (barakaca kaadi mareenka), arrimaha indhaha sida araga indhaha ee carruurta, PRA (ugu horreyn eeyaha labka ah), dystrophy corneal iyo qeybaha jirka ee loo yaqaan 'crystalline corneal opacities'. Kalkaaliyeyaashu waxay ka heli karaan baaritaanka sinta ee OFA iyo baaritaanka indhaha sanad walba takhtarka indhaha ee kaneecada (AVCO) waxayna ku diiwaangeliyaan baaritaanka CERF iyo SHOR). Sidoo kale u nugul arrinta maqaarka ee loo yaqaan 'zinc' oo ka jawaabta dermatitis, taas oo hagaajinaysa adoo siinaya zinc supplements.
Badanaa laguuguma taliyo guryo, si kastaba ha noqotee waxay ku noolaan karaan aqallo haddii si wanaagsan loo tababaray oo si habboon loo jimicsado. Siberia Huskies waa kuwo firfircoon gudaha gudaha waxayna ku fiican yihiin daarad weyn oo ood leh. Dharka culus awgood, eeyahaani waxay doorbidaan cimilo qabow. Mid waa inuu adeegsadaa caqli wanaag marka loo eego ilaalinta kuleylka adoo siinaya hooska ku filan iyo qaboojiyaha. Noocani wuxuu doorbidaa inuu ku noolaado xirmooyin.
Siberia Huskies waxay ubaahantahay qadar jimicsi ah, oo ay kujiraan maalinle socod ama orod, laakiin waa in aan si xad dhaaf ah loogu jimcin cimilada diiran. Waxay u baahan yihiin daarad weyn oo ood dheer leh, laakiin siligga ayey ku aasayaan salka xayndaabka maxaa yeelay waxay u badan tahay inay qoddaan jidkooda ay uga baxaan ugana baxaan ugaarsiga.
Koodhku si xoog leh ayuu u daadiyaa sanadkii laba jeer. Inta lagu jiro waqtigaas waxay u baahan yihiin in la cadaadiyo oo la shanleeyo maalin kasta.
Siberia Huskies waxaa u isticmaali jiray qarniyo Qabiilka Chukchi, meel ka baxsan jasiiradda Siberia ee bariga si ay u soo jiidaan caarada, dibi daaqa iyo sidii ilaaliye. Waxay ahaayeen eeyo shaqeynaya oo ku habboon xaaladaha adag ee Siberia: adag, awood u leh inay dhexgalaan xirmooyin yaryar, aadna ugu faraxsan inay shaqeeyaan saacado dhammaadka. Eeyadu waxay leeyihiin adkeyn weyn oo miisaankoodu fudud yahay. Dhaladka Siberia, Husky waxaa keenay Alaska ganacsatada dhogorta ee Malamute ee tartamada Arctic sababtoo ah xawaaraha weyn. Sannadkii 1908-kii Siberia Huskies ayaa loo adeegsaday All-Alaskan Sweepstakes-kii ugu horreeyay, oo ah dhacdo ay muusigyaashu eyda u kaxaynayaan orod dhererkeedu dhan yahay 408-mayl ah. Eeyadu waxay caan ku noqdeen 1925 markii uu cudurka diphtheria ka dilaacay Nome, Alaska. Siberia Huskies waxaa loo adeegsaday inay dadka u keento dawada aadka loogu baahan yahay. Bilowgii ilaa bartamihii-1900-aad Admiral Byrd wuxuu eeyaha u adeegsaday Safaradiisii ​​Antarctic. Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka eeyadu waxay u adeegeen Qeybta Raadinta iyo Samatabbixinta ee Arctic. Hibooyinka Siberia Husky waa dharbaaxooyin, gaadhigi iyo tartan. Siberia Husky waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1930.
ingiriiska bulldog faransiiska bulldog mix puppy
Echo Siberia Husky oo ah eey yar oo 8 toddobaad jir ah— Waxaan hada helnay Echo 3 maalmood ka hor waana cajiib! Si caqli badan ayuu horay u bartay inuu igu soo boodboodo markuu u baahdo inuu baxo oo wuxuu bartay inuu fadhiisto gadaashiisa ganacsigiisa qabtaa si uu u helo daaweyntiisa. Xitaa uma baahni inaan dhaho mar dambe! Wuu ka buuxa tamarta wuxuuna jecel yahay inuu joogo qol kasta oo aan ku jiro. Gabi ahaanba waan jeclahay isaga durba
Balto eey Siberia Husky eey ah 11 todobaad jir
Kani waa Teddy casaanka iyo caddaanka wooly Siberian Husky leh indho buluug ah at 5 1/2 sano jir. Koodhka dhogorta leh ee dhogorta dheer leh (oo mararka qaarkood loo yaqaan dhogor dhogor ama wooley) wuxuu ka yimaadaa hiddo-wadaha is-bedbeddelaya oo kuma jiro heerka qoraalka naadiga digaagga badankood.
Sawirkani wuxuu muujinayaa sida jaakadda loo yaqaan 'Husky' ay ugu soo baxaan googo 'xilligii daadinta. Cadayashada eeyga waxay ka caawineysaa in timaha laga saaro ka hor inta aysan guriga oo dhan gaarin.
Ace indhaha buluugga ah ee Siberia Husky sida eey
KU qashin yar eey Siberia Husky ah waxaa leh Husky (kor ka muuqda)
Genevieve casaanka iyo caddaanka Siberia Husky waxay si firfircoon ugu raaxeysataa jiidista iyo jiidista milkiilaheeda skis.
Normey, waa saafi cad oo Siberia Husky ah oo jira 5 sano
Diablo caddaanka, buluugga ah ee Siberian Husky
pitbull buluug sanka isku darka iyo sahashan Siberian
Kiya Siberian Husky oo caan ku ah da'da 2 sano jir
Eeg tusaalayaal badan oo Siberia Husky ah
Sawirada Siberia Husky 1
Sawirada Siberia Husky 2
Sawirada Siberia Husky 3
Sawirada Siberia Husky 4
Sawirada Siberia Husky 5
Sawirada Siberia Husky 6
Sawirada Siberia Husky 7
Siberia Husky Su'aalaha la Weydiiyo
shaybaarka iyo jarmalka gaagaaban
jack russell / chihuahua isku dhafan
bunny collie lab mix
7 bil eey rottweiler jir
maltese oo lagu qasay adhijirka Jarmalka